Qadar oo Sheegtay in Dowladda Itoobiya ay Ka Taageerayso la Dagaalka Xarakada Al Shabaab.
Wednesday April 12, 2017 - 06:54:54 in Wararka by
Xukuumadda dabadhilifka Wadanka Qadar ayaa ku dhawaaqday in qaar katirsan wadamada dhaca Bariga qaaradda Afrika ay ka taageerayso ladagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Boqorka Qatar iyo R/wasaaraha Itoobiya
Kadib socdaal maalmo qaatay oo uu Boqorka Qadar cagta ku mariyay wadamada Itoobiya iyo Kenya ayuu ku sheegay in dhan walba uu ka taageeri doono dowladahaasi la liic liicaya dhaqaalaha xumida in dagaallada ay kula jiraan Xarakada Al Shabaab.
Xamad Bin Tamiim Aala Thani oo ah Boqorka Qadar ayaa isagoo magaalada Addis Ababa kula kulmayay R/wasaaraha Itoobiya Haila Maryam wuxuu sheegay in Qadar ay dhanka isku xirka la dagaalanka Xarakada Al Shabaab ka taageerayso Itoobiya balse isagu uu ugu yeeray Argagaxiso.
Qadar ayaa ballan qaaday in mashaariic horumarineed ay barbar socan doonaan taageerada dhanka ammaanka ah ay oo ay siinayso xukuumadda Addis Ababa.
Dhinaca kale Hoggaamiyaha Qadar ayaa gaaray magaalada Nairobi ee wadanka Kenya wuxuuna kulamo la qaatay Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa Wilam Rutu.
Xukuumadda Qatar waxay sheegtay in dowladaha mandiqadda Bariga Afrika ay laleedahay xiriir soo jireen ah oo dhanka dhaqaalaha iyo amniga ah.
Socdaalka Amiirka Qadar ee wadamada Itoobiya iyo Kenya ayaa imaanaya in Qadar ay kaalin ballaaran ku yeelatay duullaanka shisheeye ee Soomaaliya lagusoo qaaday.
Ilo wareedyo dublumaasiyadeed waxay sheegayaan in wasaaradda arrimaha dibadda Qadar ay lacago malaayiin dollar ah ku bixisay doorashadii Madaxtinimo ee bilo ka hor ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoona suurtagelisay in Farmaajo uu madaxweyne u noqdo DF-ka.
Safaaradda Qadar ee Magaalada Muqdisho ayaa lagu eedeeyay in boorsooyin lacago ah ay siisay Ololihii doorashada Farmaajo waxaana lacagtaas lagu laaluushay Xildhibaanada DF-ka oo ugu dambeyn doortay Max’med Cabdullaahi Farmaajo.